Wararka - Habka qaadista dhagaxa ee warshadda daqiiqda
Daqiiqda, habka looga saaro dhagxaanta sarreenka waxaa loo yaqaan 'de-stone'.Dhagaxyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee leh qaybo kala duwan oo ka duwan kan sarreenka waxa lagu saari karaa habab baadhiseed fudud, halka qaar ka mid ah dhagxaanta la le'eg yahay sarreenka ay u baahan yihiin qalab gaar ah oo dhagaxa lagaga saaro.
De-stoner waxaa loo isticmaali karaa iyadoo la isticmaalayo biyo ama hawo dhexdhexaad ahaan.Isticmaalka biyaha oo ah meel dhexdhexaad ah oo laga saaro dhagaxyada waxay wasakhayn doontaa kheyraadka biyaha oo marar dhif ah ayaa lagu dabaqay.Habka looga saaro dhagaxa iyadoo hawada loo isticmaalo dhexdhexaad ahaan waxaa loo yaqaannaa habka qallalan.Habka qalalan ayaa hadda si weyn loogu isticmaalaa warshadda daqiiqda, waxaana qalabkiisa ugu weyn uu yahay mashiinka qaadista dhagaxa.
Destoner inta badan waxay isticmaashaa kala duwanaanshaha xawaaraha hakinta sarreenka iyo dhagxaanta hawada ku jira si looga saaro dhagxaanta, habka ugu muhiimsan ee shaqadana waa shaandhada dusha sare ee dhagaxa.Inta lagu jiro shaqada, ka saar dhagaxu wuxuu gariiraa jiho gaar ah wuxuuna soo bandhigayaa qulqulka hawada sare ee qulqulaya, kaas oo lagu eegayo farqiga u dhexeeya xawaaraha hakinta sarreenka iyo dhagxaanta.
Habka doorashada ee warshadda daqiiqda
Habka nadiifinta daqiiqda qamadida, kala soocida wasakhda ah ee aan ka duwanayn sarreenka alaabta ceeriin ee farqiga dhererka ama qaabka hadhuudhka ayaa loo yaqaan xulashada.Wasakhda laga saarayo qalabka la xushay ayaa badanaa ah shaciir, miro, digir, iyo dhoobo.Waxyaalahan wasakhaysan, shaciir iyo hazelnuts waa la cuni karaa, laakiin dambaskooda, midabkooda iyo dhadhankooda ayaa saameyn xun ku leh alaabta.Sidaa darteed, marka alaabtu tahay burka heerka sare, waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo xulashada habka nadiifinta.
Sababtoo ah xajmiga walxaha iyo xawaaraha joojinta ee wasakhdaas oo kale waxay la mid yihiin kuwa sarreenka, way adagtahay in la saaro iyada oo la adeegsanayo baaritaanka, saarista dhagaxa, iwm. Sidaa darteed, xulashada waa hab muhiim ah oo lagu nadiifiyo qaar ka mid ah wasakhda.Qalabka xulashada sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah mishiinka dhululubada goglan iyo mashiinka xulashada wareega.